Imfazwe yasePrinceton kwi-Revolution yaseMerika
Impikiswano kunye nosuku:
Imfazwe yasePrinceton yahlaselwa ngoJanuwari 3, 1777, ngexesha le- American Revolution (1775-1783).
Jikelele uGeorge Washington
UBrigadier General Hugh Mercer
Omkhulu uGeneral Lord Charles Cornwallis
ULieutenant Colonel Charles Mawhood
Emva kokunqoba kwakhe uKrismesi 1776 kwi-Hesse eTrenton , uGeneen George Washington wabuyela emva koMlambo waseDelaware waya ePennsylvania.
NgoDisemba 26, uLieutenant Colonel John Cadwalader wasePennsylvania wabuyela ngaphaya komlambo eTrenton waza wachaza ukuba intshaba yayiphelile. Ukuqiniswa, iWashington yabuyela eNew Jersey ngobuninzi bomkhosi wayo kwaye yayicinga isikhundla esinqabileyo. Ukulindela ukusabela ngokukhawuleza kweBrithani ekunqobeni kwama-Hesse, iWashington yabeka umkhosi wakhe kumgca wokuzimela emva kwe-Assunpink Creek ukuya ngasezantsi kweTrenton.
Ukuhlala phantsi kwentambo ephantsi kweenduli, i-American yasekhohlo yayisekelwe kwi-Delaware ngelixa ilungelo lasempumalanga. Ukunciphisa naluphi na ukuhlasela kweBrithani, iWashington iholele uBrigadier General Matthias Alexis Roche de Fermoy ukuba athathe inkunzi yakhe, eyayibandakanya isibalo esikhulu sabarhwebi, ngasentla ngasentla kwi-Five Mile Run kwaye ibhalela indlela eya ePrinceton. E-Assunpink Creek, eWashington babhekene neengxaki njengoko ukufakwa kwamadoda amaninzi kuye kwaphela ukuba kuphele ngo-Disemba 31. Ngokwenza isikhalazo kunye nokunikezela i-dollar eyishumi, wayenako ukukholisa abaninzi ukuba banwebe inkonzo yabo ngenyanga.
E-New York, i-Washington inkxalabo malunga nokuphendula okomeleleyo kwaseBrithani kwenzelwe ngokusekelwe. Ethukuthelwe ngenxa yokutshatyalaliswa kweTrenton, uGeneral William Howe wancenga i-General General Charles Charles Cornwallis kwaye wamyalela ukuba aqhubele phambili kumaMelika kunye nama-8,000 amadoda. Ukuhamba ngasemzantsi-ntshona, iConwallis yashiya amadoda angama-1 200 phantsi kweLieutenant Colonel Charles Mawhood ePrinceton kunye namanye amadoda angama-1,200 phantsi kwe-Brigadier General Alexander Leslie eMaidenhead (uLawrenceville), ngaphambi kokuba ahlangabezane nabaseMelika abaxhasi be-Five Mile Run.
Njengoko de de Fermoy wayedakiwe kwaye wayeduka kude nomyalelo wakhe, ubukhokheli baseMerika bawela kuColonel Edward Hand.
Ukuxoshwa emva kwe-Five Mile Run, amadoda angama-Hand enza amanani amaninzi kwaye awabambezela ukuqhubela phambili eBrithani emva kwemini ka-Januwari 2, 1777. Emva kokuqhuba ukulwa ukubuyela kwizitrato zaseTrenton, bahlangana nomkhosi waseWashington kwiindawo eziphakamileyo emva kwe-Assunpink Creek. Ukuphonononga isikhundla saseWashington, iConwallis yaqalisa ukuhlaselwa okungathathi mithathu kwisilingo sokuthatha ibhuloho phezu komlambo ngaphambi kokumisa ngenxa yobumnyama obukhulayo. Nangona wayelumkisa ngabasebenzi bakhe ukuba iWashington iyakwazi ukusinda ebusuku, iConwallis yazikhupha izinto ezixhalabileyo njengoko wayekholelwa ukuba amaMerika ayengenawo umgca wokubuyela ekhaya. Kwiindawo eziphakamileyo, iWashington yadibanisa ibhunga lemfazwe ukuba lixoxe ngale meko kwaye yacela abaphathi bayo ukuba bafanele bahlale baze balwe, bahoxise ngaphesheya komlambo, okanye benze isiteleka ngokumelene neMahood e-Princeton. Ukunyulwa kwendlela yokubhikisha yokuhlasela iPrinceton, eWashington yalela imithwalo yempi yathunyelwa eBurlington kunye namagosa akhe ukuba aqale ukulungiselela ukuhamba.
Ukubamba i-Cornwallis endaweni, iWashington yalela ukuba amadoda angama-400-500 kunye namanqana amabini ahlale kwi-Assunpink Creek line ukuthabatha i-campfires kunye nokwenza izandi.
La madoda ayenomhlala-phantsi ngaphambi kokuntwela kwelanga aze abuyele emkhosini. Ngo-2: 00 AM ubuninzi bombutho behamba ngokunyanisekileyo befudukela e-Assunpink Creek. Ukuqhubela empuma ukuya eSandtown, eWashington ke kwajika kumntla-ntshona kwaye kwahamba phambili ePrinceton ngeQuaker Bridge Road. Kwathi kusasa, amaMerika ayedlula iStony Brook malunga neekhilomitha ezimbini ukusuka ePrinceton. Ngomnqweno wokubamba umyalelo we-Mawhood edolophini, iWashington idityanise i-Brigadier General Hugh Mercer kunye neendleko zokutshontsha ngasentshonalanga kwaye zikhusele kwaye ziqhubele phambili kwiNdlela yeNdlela. Engaziwa eWashington, amaMasta ayefuduka ePrinceton eTrenton kunye namadoda angama-800.
Ukuhlawula i-Post Road, i-Mawhood yabona amadoda kaMercer avela emaplanga aze ahlasele. UMercer waqulunqa ngokukhawuleza amadoda akhe ekulweni kwintsimi yezityalo ezikufutshane ukuze ahlangabezane nokuhlaselwa eBrithani.
Ukuhlawula ama-America okhathele ama-America, amaMashes ayekwazi ukuwagxotha. Ngenkqubo, uMercer wahlukana namadoda akhe kwaye wuleza wajikelezwa yiBrithani eyayifaka iWashington. Ukugatya umyalelo wokunikezela, uMercer wathabatha ikrele lakhe waza wamangalela. Kwimiphumo eyabangela ukuba, wabethwa ngamandla, aqhutywe ngama-bayonethi, kwaye washiya ukuba wafa.
Njengoko imfazwe yaqhubeka, amadoda kaCadwalader angena kwi-fraythi aze ahlangabezane nesigwebo esifana ne-Mercer's brigade. Ekugqibeleni, iWashington yafika kwindawo leyo, kwaye ngenkxaso kaMaja Jikelele uJohn Sullivan wazinzisa umda waseMerika. Ukuvuselela imikhosi yakhe, iWashington yajika yahlambalaza kwaye yaqalisa ukunyanzela amadoda aMawhood. Njengoko amaMerika amaninzi afika entsimini, aqala ukusongela amaBritish. Xa ebona isikhundla sakhe sihlahloka, uMawate wayala intlawulo ye-bayonet ngenjongo yokuphula imigca yaseMerika nokuvumela amadoda akhe ukuba abaleke eTrenton.
Ukuqhubela phambili, baphumelela ekungeneni kwe-Washington isikhundla baze babale phantsi kweNdlela yeNdlela, kunye namabutho aseMerika ekuphandeleni. Kwi-Princeton, uninzi lwabantu baseBritani abasele babalekela eNew Brunswick, nangona kunjalo i-194 yabalekela e-Nassau Hall ikholelwa ukuba izindonga eziqingqiweyo zakhiwo ziya kubakhusela. Ukujongana nesakhiwo, iWashington yabelwa uCaptain Alexander Hamilton ukukhokela ukuhlaselwa. Ukuvulwa komlilo ngamatye, amabutho aseMerika ahlawuliswe kwaye atyanzelwa abo bangaphakathi ukuba banikezele ekupheleni kwelo lizwe.
Ukuqhayisa ngokunqoba, iWashington inqwenela ukuqhubela phambili ukuhlasela i-chain yase-British e-New Jersey.
Emva kokuvavanya isimo sakhe somkhosi okhulelwe, kwaye eyazi ukuba iM Cornwallis yayisemva kwakhe, uWashington wakhetha esikhundleni sokunyuka ngasentla aze angene kwiindawo zokuhlala zasebusika eMorristown. Ukunqoba kwePrinceton, kunye nentambo eTrenton, kwandinceda imimoya yaseMerika emva kwentlekele eyabonayo iNew York ewa eBritish. Ekulweni, iWashington yalahlekelwa ngu-23, kuquka iMercer, kunye nama-20 awonakele. Ukubulawa kwabaseBrithani kwakunzima kwaye kubalwa ama-28, ama-58 abalimele, kunye nama-323 athathwe.
Amabutho aseBritani: iMfazwe yasePrinceton
Imibuzo Eshiywa yiBoston Massacre
I-American Revolution: Banastre Tarleton
Ukuguqulwa kweMelika: Omkhulu uGeneral William Alexander, Nkosi Stirling
Iindlela ezichanekileyo kunye neendlela ezingalunganga zokudweba ibhola yeCue
Umqambi uRon Howard Uxoxa "UGriorge onomdla"
Indima yamaSilamsi eBurhulumenteni baseAfrika
Isizathu Esiyinyaniso Siya kuPaint
I-Comedic Male Maleologues
Kutheni i-Ocean Ocean iyamanzi? I-Whale Sperm!
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "I-Acquiser" (ukufumana)